अन्तर्वार्ता Archives - Arthapage
बाँकेमा ‘निर्माण होलिडे’गर्नुपर्ने अवस्था किन ?
टेकबहादुर खड्का, अध्यक्ष,बाँके निर्माण व्यवसायी सघ बाँके ‘निर्माण होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने अबस्था आएको छ । निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि भएपछि निर्माण कार्य ठप्प भयाे । चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका करिब ७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ५ सय सरकारी निर्माण आयोजनाका काम रोकिएको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदाको बेलाभन्दा अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक भएकाले व्यवसायी घाटामा जान थालेका छन्
नेपालगन्जमा एमाले झन् बलियो भएको छ, कार्यकर्ता एकढिक्का छन्
मलाई पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, हामीले त्यो ढंगले काम गर्ने हो । नेपालगञ्जलाई गौरब गर्न लायक बनाउने हाम्रो दृष्टिकोण हो । यो धेरै पुरानो शहर हो । तर, पुरानो भएर पनि जति अवसर पाउनुपर्ने हो, त्यो अवसर नेपालगञ्जले पाउन सकेन । जुन हिसाबले विकास हुनुपर्ने हो, नेपालगञ्जमा अहिले पनि त्यो हुन सकेको छैन । विभिन्न सेक्टरमा काम गर्न बाँकी छ । यहाँ त्यस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ, जसले नेपालगञ्जको विकास गर
‘समृद्ध बाँके निर्माणमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ’-अब्दुल वाहिद मन्सुरी
२०७६ साल माघ १३ गते नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल वाहिद मन्सुरी नेपालगन्जको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्वमा छोटो समयमै प्रभाव जमाउन सफल व्यक्ति हुन् । कुरा भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने व्यवसायिक नेता मन्सुरी अध्यक्ष चुनिनुअघि संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । उनी दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य, एक कार्यकाल उपाध्यक्ष रहिसकेका थिए । संघको कार्यसमितिको अरु पदमा रहँदा उनले दे
३२ महिनामा वीरेन्द्रनगरमा भएका सुधारका काम-टिकाराम ढकाल
बाईबाई वीरेन्द्रनगर! वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मैले ३२ महिना ५ दिन कार्य गरि हिँजो पौष ७ देखि औपचारिक रुपमा विदा भएको छु। यस अवधिमा आदरणीय नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी तथा उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल लगायत जनप्रतिनिधीहरुले ल्याएका नीति मेरा जुझारु कर्मचारी साथीहरुको सहयोगमा केही गर्ने अवसर प्राप्त भयो । आफ्नो कार्यकालमा नगर क्षेत्रभरी करिव ५५ किलोमिटर आफ्नै अप्टिकल फाईबर सहित ८९ स्थानमा सिसिटिभी क्
श्याम विष्ट( हाम्रो पिपलबोटबाट) नेपालगन्ज : कोहलपुरका उद्योगी व्यवसायीको छातासंगठन कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षका प्रत्याशी हुन लक्ष्मणराज पौडेल । फागुन २२ गते शनिवार नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि कोहलपुरमा ९ औँ अधिवेशन हुँदैछ । संघको अधिवेशनबाट अध्यक्ष सहित २२ जना पदाधिकारी सदस्यहरु चयन हुनेछन् । अध्यक्ष पदका प्रत्याशी पौडेलसंगको कुराकानी- १. तपाईंको चुनाव जित्ने आधार के हो ? – कोह
राज्यले व्यवसायीलाई करदाता, मतदाता र चन्दादाताका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्र र सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्नेमा व्यवसायीलाई प्रयोग गर्नतिर मात्र राज्यको ध्यान जाने हो भने व्यवसायीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुको अर्थ रहँदैन । सरकारले ठूलो हिस्सा कर व्यवसायीहरूबाट उठाउँछ, तर व्यवसायीको समस्याप्रति गम्भीर नहुँदा हामी तमाम उद्योगी व्यवसायीले बेला–बेलामा विभिन्न समस्या
अर्थतन्त्रलाई गति दिन ६ वटा क्षेत्रमा जोड दिएको छु : अर्थमन्त्री पौडेलसंगको वार्ता
चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा परेको मुलुकलाई भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप समस्यामा पारेको थियो । सबै समस्यालाई छिचोलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजानु भएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । कोभिड– १९ का कारण फेरि
भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमा देखाएका छौं – धवल शम्सेर राणासंगको अन्र्तवार्ता
डा. धवल शम्शेर राणा बाँकेको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ । २०५४ सालमा पनि नेपालगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख हुनुभएका राणालाई दुई दशकपछि नगरबासीले फेरी उप–महानगरपालिकाको नेतृत्व सुम्पिनुभएको तीनवर्ष पुरा भएको छ । अमेरिकाबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्याबारिधी गर्नुभएका डा. राणासँग नेपालगञ्जको समग्र विकास निर्माण लगायतका विषयमा उहाँसँग पत्रकार गोविन्द शर्माले गर्नुभएको वार्ता - तपा
कोहलपुरमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दैनिक बढ्दो क्रममा छ । समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण देखिएपछि हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ । यद्यपी अहिलेको समय चिन्तित हुने होइन सचेत, सजग हुँदै र उच्च मनोवलका साथ कोरोना संक्रमण थप फैलिन नदिन लाग्नुपर्ने बेला हो । सबैको सामुहिक प्रयासबाट मात्र महामारीको यो संकटबाट पार पाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै जिल्लाका अरु पालिकाको संकट व्यवस्थापनबाट पनि सिक
अङ्गद बहादुर शाहीले स्वास्थ्य कार्यालय दाङ्गको जिम्मेवारी सम्हाले
नेपालगन्ज ३ भदौ : बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत अङ्गद बहादुर शाहीले बुधवारदेखि स्वास्थ्य कार्यालय दाङ्गको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । शाहीको केही दिन अघि बाँकेबाट सरुवा भएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय दाङ्गमा शाहीको स्वागत गरिएको थियो । कार्यभार सम्हाल्दै शाहीले कोरोना संक्रमण बिरुद्धको अभियानलाई सशक्तरुपमा अगाडी बढाउने बताए । उनले भने,–‘अहिलेको विषम अवस्थामा दाङ्गलाई कसरी सुरक्षित बनाउ